Setha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID Ngisho Thola i-iPhone yami ivaliwe
Setha kabusha / Susa i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID Ngisho Thola i-iPhone yami ivaliwe
Kugcine ukubuyekezwa ngoSepthemba 25, 2020 ngu-Ian McEwan
Ufuna ukusebenzisa i-iPhone yakudala kodwa ikuthole ivuza noma iqhwa njalo? Noma mhlawumbe uzothengisa i-iPhone yakho noma usanda kuthenga idivaysi esetshenzisiwe, futhi ufuna ukusula yonke imininingwane ekuyo. Ngemuva kwalokho into enhle ongayenza ukusetha kabusha i-iPhone.
Kungenzeka yini ukuthi usethe kabusha i-iPhone / i-IP ngaphandle kwe-Apple ID / Iphasiwedi? Noma Thola i-iPhone yami ivuliwe?
Yebo. Ngasizathu simbe, abantu bangase balahlekelwe ngumkhondo we-Apple ID nephasiwedi futhi babambeke ekusekeni kabusha i-iPhone. Ngakho-ke, kulesi sihloko, sizokukhombisa izindlela ezimbalwa zokusetha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID ne-password. Ukuthi Thola i-iPhone yami kuvulwe noma kuvaliwe ocingweni, ungakwenza nakanjani ngokulandela izinkombandlela ezingezansi.
Setha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID / Iphasiwedi Lapho Thola i-iPhone yami ivaliwe
Ungayisetha kanjani kabusha i-iPhone Ngaphandle kwe-Apple ID Iphasiwedi Lapho Thola i-iPhone yami ivuliwe
[Ukusebenza] Setha kabusha i-Apple ID / Iphasiwedi ye-ID ye-Apple
Setha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID / Iphasiwedi Uma Thola i-iPhone Yami icishiwe
Inketho 1: Setha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID ne-password nge-4uKey
Uma kukhulunywa ngokuthi ungayisetha kanjani kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID ne-password, iTenorshare 4uKey ingasiza okuningi. Ngaleli thuluzi elisuswayo lokususa i-Apple ID kanye ne-plugin ekhiyiwe yesikrini, ungakwazi ukusetha kabusha kalula bese usula i-iPhone ngokuchofoza okumbalwa.
Isinyathelo 1. Qalisa i-4uKey kwi-PC yakho
Okokuqala, landa futhi ufake iTenorshare 4ukey kwikhompyutha yakho.
Esibonakalayo esikhulu, uzobona izinketho ezimbili: Vula Iphasikhodi Yokukhiya isikrini futhi Vula i-ID ye-Apple. Please select the Vula i-ID ye-Apple.
Isinyathelo 2. Xhuma i-iPhone ku-PC
Okulandelayo, xhuma i-iPhone yakho kwikhompyutha usebenzisa ikhebula le-USB. Sicela usebenzise ikhebula le-USB elifanele kudivayisi yakho ukuvikela glitches.
Isoftware izokusiza ukuthi uvule isikrini.
Ukuze uqhubeke, thepha ku Trust inkinobho ku-iPhone yakho. Uzodingeka ukuthi uthayiphe iphasikhodi yakho ukuqinisekisa inqubo.
Isinyathelo 3. Qala ukuvula i-id ye-apula
Lapho isikrini sibonisa isici Sokuvula i-Apple ID, chofoza inkinobho yokuqala ukuze uqhubeke.
Lapho i-Thola i-iPhone yami ikhutshaziwe, uhlelo luzosusa i-Apple ID bese isetha kabusha i-iPhone yakho ngokuzenzakalelayo.
Uma i-iPhone yakho isebenza I-iOS 10.2 ku-iOS 11.4, ungasebenzisa leli thuluzi ukusetha kabusha i-iPhone lapho i-Thola i-iPhone yami inikwe amandla.
Uma kunjalo, isikrini sizokwazisa ukuthi usethe kabusha izilungiselelo zakho ze-iPhone.
Ukuze wenze lokhu, sicela uye ku- Amasethingi imenyu, thinta ku- “General", Bese ukhetha"Hlela".
Chofoza "Setha kabusha zonke izilungiselelo”. Ungacelwa ukufaka iphasikhodi yakho.
Sicela wazi ukuthi ngokusetha kabusha idivaysi, iTenorshare 4uKey izosula i-Apple ID. Futhi, ungavuli amadivayisi akho ngenkathi inqubo iqhubeka. Ukwenza lokhu kungalimaza uhlelo lwe-iOS.
Uzokwaziswa uma ukusetha kabusha sekuqediwe. Ngaleso sikhathi, ususe kabusha ngempumelelo i-iPhone yakho ngaphandle kokusebenzisa i-Apple ID.
Inketho 2: Setha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID nge-iTunes Ngokufaka Imodi ye-DFU
Isinyathelo 1. Qalisa i-iTunes bese unamathisela idivaysi
Ukuze usethe kabusha i-iPhone usebenzisa i-iTunes, uzodinga ukufinyelela kudivayisi yakho ngokuyixhuma kwikhompyutha yakho.
Ukuze uthole lokhu, sicela uqinisekise ukuthi uzobe usebenzisa ikhebula le-USB elifanele ukuvikela glitches esizayo. Futhi, sicela uqinisekise ukuthi i-Thola My iPhone ikhutshaziwe.
Isinyathelo 2. Faka Imodi ye-DFU / Mode Yokubuyisela
Kwisinyathelo sokuqala, sicela ucime ucingo lwakho.
Okulandelayo, cindezela inkinobho yasekhaya isikhathi eside. Lokhu kuzofaka idivaysi yakho kwimodi yokuvuselela yedivayisi. Le nqubo izolayisha kabusha isoftware ne-firmware yedivayisi yakho. Ukubuyisela i-iPhone ngaphandle kwe-ID ye-Apple esebenzisa indlela ye-DFU imvamisa kuyindlela yokugcina yokuxazulula inkinga nge-iDevice.
Ukuze uqhubeke, cindezela ubambe inkinobho yamandla neyekhaya cishe imizuzwana eyi-10. Ngemuva kwalokho, khipha inkinobho yamandla bese ugcine ukubamba inkinobho yasekhaya. Uma ubona uphawu lwe-Apple lunyamalala, kusho ukuthi ufake ngempumelelo i-iPhone yakho kumodi ye-DFU. Chofoza ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi ungene kanjani Mode we-DFU lapha.
Kodwa-ke, uma uthola inqubo eshiwo ngenhla iyinkimbinkimbi kakhulu, kunenye indlela ongazama ngayo.
Isinyathelo 3. Setha kabusha i-iPhone
Kukhompyutha yakho, i-iTunes izoveza isaziso uma ithola ukuthi idivayisi yakho ikumodi yokuthola kabusha.
Ngemuva kwalokho, ungayisetha kabusha i-iPhone yakho. Ukuze uqhubeke, chofoza OK > Isifinyezo > Buyisela i-iPhone. Uzokwaziswa uma ukusetha kabusha sekuqediwe, futhi i-iPhone yakho izoqala kabusha ngokuzenzakalelayo.
Inketho 3: Setha kabusha i-iPhone ngaphandle kwe-Apple ID ne-password nge Setting
I-Apple yenze amadivaysi ayo ngesici esakhelwe ngaphakathi sokusetha kabusha kwasefekthri. Le ndlela izosula ngokuzenzakalelayo yonke imininingwane ekhona bese ibuyisela idivaysi kuzilungiselelo zayo zangempela.
Okokuqala, indlela eya ku Amasethingi isithonjana, bese uthepha General bese uthola Hlela inketho kusuka phansi, bese ukhetha i- Sula konke okuqukethwe nezilungiselelo.
To avoid erasing your iPhone mistakenly, you will need to confirm your request by tapping “Sula Manje“, typing in your iPhone passcode, and taping on the “Sula i-iPhone”Inkinobho ukuqeda kabili.
Ungayisetha kanjani kabusha i-iPhone Ngaphandle kwe-ID ye-Apple ID Uma Thola i-iPhone Yami ivuliwe
Uma i-Find My iPhone ivuliwe, uzodinga ukufaka i-Apple ID ne-password uma uzama ukusetha kabusha i-iPhone nge-iTunes noma Izilungiselelo. Nge-4ukey, ungasusa ngempumelelo i-iPhone ekuqaleni, kepha uma ufika engxenyeni yokusetha, usadinga ukwenza kusebenze le-iPhone ngokungena kwi-ID ye-Apple nephasiwedi eyasetshenziselwa ukusetha le divayisi ngaphambili.
Ngakho-ke, kanjani emhlabeni ukusetha kabusha i-iPhone ngaphandle kwephasiwedi ye-Apple ID lapho Thola i-iPhone yami ivuliwe?
Okokuqala, usengasebenzisa i-4uKey ukusetha kabusha i-iPhone yakho ngokusebenzisa i- Vula Iphasikhodi Yokukhiya isikrini module. Ngemuva kwalokho, ngokusekelwe kwinqubo engenhla, udinga ithuluzi lokususa ukukhiya ukukhiya kwe-iCloud ukuze udlule ukukhiya kokusebenza. Ungasebenzisa I-Tenorshare 4MeKey lapha ukwenza kusebenze.
Faka uhlelo lokusebenza olufakiwe bese lusebenza ku-PC yakho.
Bese uxhuma i-PC kwi-PC ngentambo ye-USB. Musa unqamule idivaysi ngenkathi kuqhubeka, noma i-iPhone yakho kungenzeka ikhubazeke.
Ukusuka ekubonakaleni kohlelo, chofoza inkinobho yokuqala, bese ubeka uphawu esivumelwaneni bese uqhafaza inkinobho elandelayo. Manje, ithuluzi lokuqhekeka kwejele lizolanda ngokuzenzakalelayo.
Chofoza inkinobho ethi Start Jailbreak bese ulandela imiyalo esesikrinini ukuze ungene ejele futhi udlule isinyathelo sokukhiya sinyathelo ngesinyathelo.
[Workaround] Setha kabusha i-Apple ID / Iphasiwedi ye-Apple ID
Ungayisetha kanjani kabusha i-Apple ID?
Vula Isiza se-Apple ID kusuka kwisiphequluli sakho sewebhu. Bese ufaka imininingwane yakho efana, igama lakho, igama lokugcina, nekheli le-imeyili elihlotshaniswa ne-ID yakho ye-Apple.
Here are more other methods to help you do so. Please check “Uma ukhohlwe i-ID yakho ye-Apple” from the Apple Support.
Ungayisetha kanjani kabusha i-Apple Iphasiwedi?
Iya ku appleid.apple.com/ bese uchofoze Ukhohlwe i-ID ye-Apple noma i-password? ngaphansi kwe Phatha i-akhawunti yakho ye-Apple ingxenye.
Kusuka ekhasini elisha, kufanele Faka i-ID yakho ye-Apple ukuze uqalise. Then select the options to reset your password and choose to “Phendula imibuzo yezokuphepha“. Follow the step by step instruction to reset your password. IF you can’t recall the answer to the security questions, there are other options, like reset by getting an email or reset password with a Recovery Key.
For more information, you can check “Uma ukhohlwe iphasiwedi yakho ye-Apple ID” here.
Thembela Le Khompyutha Ku-iPhone Ekhubazekile
Setha kabusha i-iPad ekhiyiwe / ekhutshaziwe
"I-iPad Ikhutshaziwe, Xhuma ku-iTunes" Ungayilungisa Kanjani
Lungisa i-iPhone ekhubazekile nge-iTunes noma i-iCloud
Vula i-iPod ekhubaziwe noma ekhiyiwe
Buyisela i-iPhone ekhubazekile